कठै ! नौ महिनाको दुधे बा,लक र सु,त्केरी आमा लाई घा टमा ज लाउनु पर्दा रु वा बा सी छायो - ABNews Nepal
कठै ! नौ महिनाको दुधे बा,लक र सु,त्केरी आमा लाई घा टमा ज लाउनु पर्दा रु वा बा सी छायो
Jan 12, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, latest nepal, latest ramailo samachar, nepali tik tok star, taja khabar nepal, tajakhabar
झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका १३ बस्ने बिद्या उप्रेती ९ महिनाको गर्भ सहित आफ्नै घरमा झु’न्डि’एको अवस्थमा फे’ला परेकी छिन । बच्चा जन्मिन लागेको बेला बिद्या झु’न्डि’ए’को अवस्थामा भेटिए पछि उनका माइती पक्षले
बिद्याले आ’त्मा’ह’त्या गरेको नभै उनको ह”त्या गरेको बताएका छन । बिद्याकि आमा सिताको भनाइ अनुसार छोरिलाई ज्वाइ बिबेक भट्टराईले कु’ट’पि’ट गरेर मा’रे पछि झु’न्डि’ए’को बताएकी छिन ।
बिद्यालाई घर परिवारमा सधै दाइजोको नाममा या’त’ना दिने गरेको आमाले बताएकी छिन ।
छोरिलाई मा’रि’ए’को या म’र्न बा’ध्य बनाएको भन्दै उनले छानबिनको माग गरेकी छिन । बिद्याको मृ”त्युको खबर पाए पछि आफुहरु छोरी म’रे”को ठाउँ पुग्दा ज्वाइँ बिवेक हाँसी रहेको आफुहरुले देखेको सिताको भनाइ छ ।
धेरै दु”ख गरेर हुर्काएकि आफ्नी एउटि मात्र छोरीको ह”त्या’रा’लाई क’डा स’जाय हुनुपर्ने उनको माग छ ।
बिद्या र बिबेकले आफैले मनपराएर बिहे गरेको आमा सिताको भनाइ छ । उनिहरु ४/५ वर्ष सम्म प्रेममा रहेर बिहे गरेको सिताले बताएकी छिन । तर अहिले श्रीमानले नै आ”त्मह”त्या गर्ने बाध्य बनाएको आमाको भनाइ छ ।
छोरिलाई सासुले पनि दाइजोको निहुँमा सधै त’ना’व दिने गरेको बिद्याकि सानिमाले बताएकी छिन् । विध्याले कृषि बिकास बैकमा काम गर्नको लागी सबै प्रमाण पत्र पठाइ सकेको आमाले बताएकि छिन । छोरी आफै आ”त्मा”ह”त्या गर्ने भए यो सब नगर्ने उनको भनाई छ ।
बिद्याका श्री’मानले पे’टमा भएको ब’च्चा आफ्नो नभएको भन्दै बिद्यालाई घर छोडेर जा भन्दै सधै त’ना’ब दिने गरेको भनेर बिद्याले आफ्नी मामाको छोरी तारा सापकोटालाई भनेको आमा सिताले बताएकी छिन ।
जहिले सं’का मात्र गर्ने, कहाँ गएकी, किन गएकी भनेर माइत आउदा नि भिडियो कल गरेर श्रीमानलाई जानकारी गराउनु पर्ने गरेको ताराको भनाइ छ । बिद्या र विबेक भट्टराईले बिहे गर्नु अगाडि नै शा’री’रिक सम्बन्ध पनि राखेको ताराको भनाइ छ ।
बैशाखमा बच्चा बसेको र उनिहरु साउनमा भागेर बिहे गरेको ताराले बताएकी छिन ।
विबेकले गल्ती भयो यो पे’ट’को बच्चा फा’लि’दे भनेर सधै भनेको बिद्याले आफुलाई सुनाएको ताराले बताएकी छिन । बिहे पछि बिबेकले सधै बिद्यालाई अ’प’शब्द बोल्दै गा’ली गर्ने साथै सधै कु’टपि’ट गर्ने गरेको ताराले बताएकी छिन ।
तँलाई मैले बिहे गरेर ल्याउनु नै मेरो ग’ल्ती भयो भन्दै बिबेकले गा”ली गर्ने गरेको ताराको भनाई छ । मानसिक यातनाको कारण नै बिध्याले आ’त्म’ह”त्या गरेको हुन सक्ने ताराको भनाइ रहदै आएको छ ।
भिडियो हेर्नुस् :- https://youtu.be/qAhqe2_hmRs
दैव पनि कति निष्ठुरी ! संसार नै राम्रोसँग देख्न नपाई ९ महिने शिशु’को दुर्घटना’मा मृ’त्यु !
कठै !आफ्नै साली लाई ब न्चरोले हा,नेर यस्तो भ या,नक मृ त्युु दिए यी भिनाजुले